संस्थानलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँछौं
सरकारी स्वामित्वमा रहेको जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थान (मंगलवार) फागुन ११ गते ५३ वर्ष पूरा गरेर ५४औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । प्रस्तुत छ, संस्थानको ५४औं वार्षिकोत्सव, पछिल्लो गतिविधि लगायत विषयमा संस्थानका प्रशासक (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) कविप्रसाद पाठकसँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :
राष्ट्रिय बीमा संस्थान यस वर्षको वार्षिकोत्सव कसरी मनाउँदै छ ?
यस वर्षको वार्षिकोत्सव कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच पनि भौतिक उपस्थितिमै औपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाउँदै छौं । कोरोनाले अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याएको भए पनि हामीलाई पहिलेको परम्परा धान्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही अनुसार भीडभाड कम गरेर संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयको प्रांगणमा फागुन ११ गते नै वार्षिकोत्वव समारोह गर्दै छौं ।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत फागुन २ र ३ गते केन्द्रीय कार्यालय परिसरमै निःशुल्क रूपमा आँखा शिवर पनि सम्पन्न गरेका छौं । साथै, गत फागुन ७ गते रक्तदान कार्यक्रम पनि गर्‍यौं । यसैगरी सामाजिक क्षेत्रका काम गर्दै आएको एक संस्थालाई वार्षिकोत्सव समारोहबाटै आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थानका कर्मचारीहरूबीच विभिन्न प्रकारका खेलकुद प्रतियोगिता पनि गरिएका छन् । साथै, नियमन अनुसार संस्थानका पुराना कर्मचारी तथा बढी व्यवसाय ल्याउने अभिकर्तालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।
सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको यस संस्थानले व्यावसायिक कारोबार शुरू गरेको ५४ वर्ष भएको छ । संस्थानले यस अवधिमा अपेक्षित प्रगति गरेको छ ?
५४ वर्ष भनेको वास्तवमै लामो यात्रा हो । यस अवधिमा संस्थान नेपालको बीमा क्षेत्रमा एक अग्रणी संस्थाको रूपमा स्थापित हुनुपर्ने हो । तर, त्यो भएको देखिँदैन । ५४ वर्षसम्ममा स्थापित शाखाहरू, अभिकर्ताको संख्या र व्यवसाय हेर्ने हो भने हामी पछि परेको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, सँगै हाम्रो बीमाशुल्क संकलन र बीमा कोष हेर्ने हो भने त्यति पछि परेको अवस्था पनि छैन ।
तर, यति लामो इतिहास बोकेको संस्थाले पहिलेदेखि नै राम्रोसँग काम गरेको भए संस्थान अहिले पहिलो जीवन बीमा कम्पनीको रूपमा स्थापित भइसक्ने थियो । तर, पहिला त्यसरी काम नभएपछि त्यो सफल हुन सकेन । यद्यपि, हामी अब त्यही दिशामै काम गर्न लागेका छौं ।
अहिले बीमा बजारमा १९ ओटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । अब विगतमा जुन ढंगले अगाडि बढेका थियौं । अब त्यसरी काम गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । अब काम गर्ने कार्यशैली, सोच र प्रविधिलाई परिमार्जन तथा परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
कम्पनीले सोचे अनुरूप स्थान लिन सकेको छैन भन्नुभयो । कारण के होलान् ?
विगतमा शाखा कार्यालय नै अत्यन्त कम थिए । काठमाडौं बाहिरबाट बीमा व्यवसाय लिन सक्ने अवस्था थिएन । बीमा अभिकर्ता पनि बढाउन सकिएको थिएन । त्यसमाथि लामो समयसम्म कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अवस्था पनि भएन । यस्ता कारणले विगतमा कम्पनीले व्यावसायिक गति लिन सकेन । पछिल्लो समय आएर त लामो समयदेखिको लेखा परीक्षण तथा वार्षिक साधारणसभाको काम गर्न सकिएको छैन । हाल यस्तै समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस कारण पनि संस्थानले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
कम्पनीले लामो समयसम्म व्यावसायिक गति लिन सकेन नै, अहिलको व्यावसायिक गतिविधि के कस्तो छ ?
पछिल्लो समय हामी व्यावसायिक गतविधि बढाउने मामलामै केन्द्रित छौं । लामो समयसम्म संस्थानको शाखा कार्यालय ८ ओटा थियो । काठमाडौं बाहिर दुई–तीनओटा भन्दा बढी शाखा थिएनन् । तर, अहिले हामीले शाखा कार्यालयको संख्या २२ पु¥याएका छौं भने चालू आवभित्रै बागलुङ र इलाममा शाखा कार्यालय खोल्ने तयारी छ ।
विगतमा काठमाडौं बाहिरबाट बीमालेख जारी गर्न सकिने अवस्था थिएन । काठमाडौं बाहिर शाखा कार्यालय भए पनि स्वीकृति र जारी गर्ने काम केन्द्रीय कार्यलयबाटै हुन्थ्यो ।
एउटा बीमालेख जारी गर्न नै ३ महीनासम्म समय लाग्ने गर्दथ्यो । तर, अहिले भने प्रस्ताव ल्याएको आधा घण्टाभित्र बीमालेख जारी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।
अभिकर्ताको संख्या विस्तार गर्न सबै शाखा कार्यालयलाई निश्चित संख्यामा तालीम गर्न र निश्चित संख्यामा अभिकर्ता तयार गर्न वार्षिक लक्ष्य नै दिएका छौं । त्यसले गर्दा तालीम र अभिकर्ताको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । पहिले वर्षमा एक–दुईओटा मात्र तालीम हुने गर्दथ्यो । तर, अहिले वार्षिक ७०/८० ओटा तालीम गर्नेगरी अगाडि बढेका छौं ।
हामीलाई त्यतिले मात्र पनि पुग्दैन । अहिले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले दैनिकजसो तालीम गर्दै आएका छन् । त्यसको तुलनामा हामीले गर्ने तालीम कार्यक्रम निकै कम हो । तर, हिजोको तुलनामा अहिले केही गर्न खोजेका छौं । यद्यपि, हामीले गर्नुपर्ने भने धेरै नै छ । र, क्रमशः हामी त्यस्ता काम गर्दै जानेछौं ।
हामीले विज्ञापन र विभिन्न गतिविधिको माध्यमबाट हाम्रो बारेमा जानकारी दिन शुरू गरेका छौं, जसले गर्दा संस्थानमा आम मानिसको आकर्षण पनि बढ्न थालेको छ । आम मानिसलाई विश्वस्त गर्न सजिलो भएपछि अभिकर्ता पनि सरकारी बीमा कम्पनी नै खोज्दै आएका छन् । यस्ता कारण हामीलाई अबका दिनमा अगाडि बढ्न सजिलो भने छ ।
यस्तै, हामीले प्रविधिलाई विस्तार गर्दै लगेका छौं । हामीकहाँ भएको प्रविधि अत्यन्त पुरानो थियो । हिजो हाम्रो काम डेस्कबेस्ड थियो । तर, अहिले हामीले कोर सफट्वेयर बनाएर काम गर्न थालेका छौं । ग्राहकलाई सूचना दिन एसएमएस सेवा सुचारु गरेका छौं । हिजोको दिनमा प्रिमियम बुझाए पनि कम्पनीमा पुग्यो कि पुगेन, अभिकर्ताले नै बीचमा खाइदियो कि कम्पनीलाई दियो भन्ने विषयमा ग्राहक अनभिज्ञ हुन्थे । अहिले ग्राहकको प्रिमियम कम्पनीमा आउनासाथ एसएमएस मार्फत जानकारी दिने व्यवस्था छ ।
यस्तै, कम्पनीको छुट्टै मोबाइल एप पनि बनाएका छौं । मोबाइल एपमार्फत पनि संस्थानका सम्पूर्ण सेवाहरू थाहा पाउन सकिन्छ । त्यस्तै, वेबसाइटलाई थप विकसित गरेका छाैं । त्यसबाट पनि संस्थानको सेवाको विषयमा धेरै जानकारी पाउन सकिन्छ ।
कम्पनीमा सुशासन कामय गर्ने, सेवालाई छिटो छरितो बनाउने काम पनि गर्दै आएका छौं । हामी पुरानो कामलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमै अगाडि बढेका छौं ।
यही वार्षिकोत्सवको अवसरमा एउटा नयाँ बीमा पोलिसी जारी गर्दै छौं । अन्य प्रक्डक्ट पनि बीमांकीय मूल्यांकनको चरणमा छन् । आवश्यक पक्रिया पुगेपछि उक्त प्रडक्ट पनि बजारमा आउनेछ ।
बोनसदरको विषयमा भने बीमांकीय मूल्यांकनमा भएको ढिलाइका कारण अन्योल देखिएको छ । बोनसदर बीमांकीय मूल्यांकन मार्फत तै निर्धारण हुने हो । तर, हाम्रो लामो समयदेखि बीमांकीय मूल्यांकन हुन सकेको छैन । फलस्वरूप तुरुन्त बोनसदर घोषणा गर्न सकिएको छैन । अहिले हामीले प्रतिहजार ६५ रुपैयाँ अन्तरिम बोनसदर तोकेर काम गरेका छौं । तर, बीमामा बोनसदर नै ठूलो कुरा होइन । कतिपय प्रडक्टमा बोनसदर बढी हुन्छ । तर, त्यसमा लाग्ने बीमाशुल्क तथा त्यसमा के कस्ता सुविधा छन्, त्यसले पनि महत्त्व राख्छ ।
यतिका लामो समय पार गरेको संस्थानले काठमाडौं बाहिर व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्नुको कारण के हुन सक्छ ?
खासमा यसको मुख्य कारण नै कर्मचारीको अभाव हो । काठमाडौं बाहिर व्यवसाय विस्तार गर्न सबैभन्दा पहिला कार्यालय चाहियो । त्यसका लागि कर्मचारी पनि चाहियो । तर, विगतमा हामीकहाँ कर्मचारी पर्याप्त मात्रामा भएनन् । लोकसेवा मार्फत कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले भनेको समयमै कर्मचारी ल्याउन पनि सकिँदैनथ्यो । संस्थानमा २०४५ देखि २०७५ सम्म जम्मा १९ जना कर्मचारी मात्र नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसमा पनि आधा कर्मचारी त संस्थानबाट राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छुट्टिएपछि त्यतै गए । त्यसमाथि नियमनअनुसार कर्मचारीहरू अवकाश हुँदै गए । यसरी कर्मचारीको संख्या घट्दै गएपछि विगतमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्न सकिएन । त्यस कारण बाहिर व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भएको हो ।
तर, अहिले त्यसलाई हामीले सुधार गर्दै गएका छौं । म करिब ३ वर्षअघि संस्थानको प्रशासक भएर आएपछि मात्र तीन–चारपटक कर्मचारी नियुक्तिको काम भएको छ ।
उनीहरूमार्फत नै बाहिर शाखा कार्यालय स्थापना गरेर व्यवसाय विस्तार गरेका छौं । यस्तै अभिकर्ता बनाउने, नयाँ प्रडक्ट ल्याउने विषयमा पनि हामीले काम गर्दै आएका छौं । सम्भवतः चालू आवभित्रै केही नयाँ प्रडक्ट बजारमा ल्याउनेछौं ।
नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न अरू व्यावसायिक योजना भने के बनाउनु भएको छ ? अबका दिनमा संस्थान कसरी बढ्न आवश्यक छ ?
अहिले हामीकहाँ लेखापरीक्षणमा ठूलो समस्या छ । अहिले तत्काललाई लेखापरीक्षणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । आव २०६४/६५ देखि यताको बीमांकीय मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षण गर्न सकिएको छैन । त्यसको असरले साधारणसभा पनि गर्न सकिएको छैन ।
यद्यपि, म आएपछि ९ वर्षको बीमांकीय मूल्यांकन सम्पन्न गरेका छौं । आाव २०६९/७० सम्मको बीमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन बीमा समितिमा स्वीकृतिका लागि पठाएका छौं । यस्तै, अन्य आवको बीमांकीय मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षणको काम पनि प्रक्रियामै छ । बीमा समितिमा नयाँ अध्यक्ष पनि आउनु भएको छ । यस विषयमा उहाँसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौं । समग्रमा अब हामी क्रमशः लेखापरीक्षण, साधारणसभाको काम सकाउँदै जानेछौं । यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि हामीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न सहज हुन्छ । त्यसैले अब तत्काल साधारणसभाको काम सक्नेगरी अगाडि बढेका छौं ।
विशेषगरी अब हामीले संस्थानलाई प्रविधियुक्त बनाउने गरी अगाडि बढेका पनि छौं । संस्थानले लामो समयसम्म डेस्कबेस्डमा काम गरेको थियो । अहिले हामीले त्यसबेलाका तथ्यांकहरूलाई नयाँ सफ्टवेयरमा सार्ने काम गरेका छौं । अहिले यसमा केही प्राविधिक समस्या पनि देखिएको छ । त्यो समाधान हुनासाथ पुराना डेटा नयाँ सफ्टवेयरमा आउँछन् । त्यसपछि सबै ग्राहकले मोबाइल एपमार्फत आफ्नो बीमा पोलिसीबारे जानकारी पनि लिन सक्छन् ।
यस संस्थानले अझै पनि निजी बीमा कम्पनीहरूसँग व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । उनीहरूसँग कडा रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्ने स्तरमा संस्थान कहिले पुग्छ ?
वास्तवमा अब हामी प्रतिस्पर्धामा नगई बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले त हामी पूर्णरूपमा सरकारी हौं भन्न पाएका छौं र ग्राहकलाई विश्वस्त गरेर व्यवसाय गर्न सकेका छौं । तर, निटक भविष्यमै कम्पनीमा रूपान्तरण हुँदै छौं । कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि त हामी पनि निजी कम्पनीजस्तै हौं । त्यस कारण अब हामी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बाध्यता नै छ । हामी त्यही अनुसार नै अगाडि बढेका पनि छौं ।
त्यसका लागि अब हामीले त्यही अनुरूप प्रडक्ट ल्याउनुपर्नेछ भने काम गर्ने शैली, सोच पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । त्यति गर्दा गर्दै पनि निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिन भने केही ढिलाइ भने हुन सक्छ । किनभने, हामी निजी कम्पनीहरूले जसरी तत्काल निर्णय गर्न सक्दैनौं । कम्पनीमा रूपान्तरण भए पनि हाम्रो यो समस्या रहन्छ नै । यसले गर्दा केही ढिलाइ भने हुन्छ । तर, निकट भविष्यमा संस्थान निजी बीमा कम्पनीहरूसँग कडा रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी बजारमा आउँछ ।